တင်းကိတ်နေတဲ့ ကိုယ်လုံးလေးကို စည်းချက်ကျကျလှုပ်ခါပြီး ပုရိသတွေကို ညို့ယူလိုက်တဲ့ မော်ဒယ်လ် ချိုဇင်ဝင်းပြည့်ရဲ့ ဗီဒီယို – Real Link
တင်းကိတ်နေတဲ့ ကိုယ်လုံးလေးကို စည်းချက်ကျကျလှုပ်ခါပြီး ပုရိသတွေကို ညို့ယူလိုက်တဲ့ မော်ဒယ်လ် ချိုဇင်ဝင်းပြည့်ရဲ့ ဗီဒီယို
By Cele PhyoPosted on February 15, 2021 February 15, 2021
သွယ်လျ ကျစ်လစ် လှပ လွန်းတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အလှ နဲ့ အတူ မို့မောက် ပြည့်တင်းတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်း အလှ တွေကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ ဆက်ဆီ မော်ဒယ်လ် ချိုဇင် ဝင်းပြည့် ကို ပရိသတ် တွေ သိကြမယ် ထင် ပါတယ် နော်..။ ဆက်ဆီကျကျ ညို့အား ပြင်းပြင်း ဖမ်းစား နိုင်သူလေးဖြစ်တာ ကြောင့် ပုရိသတွေ တွေ ဝန်းရံမှု ကို ရရှိပိုင် ထား သူ လေးဖြစ်ပါ တယ်..။ သူမ ကတော့ လှပကြည် လင် တဲ့ အသားအရေလေး နဲ့ ကော်ပတ်ရုပ်လေး လို ချစ်စဖွယ် မျက်နှာလေး ကိုပါ ပိုင်ဆိုင်ထား သူလေး လည်းဖြစ် ပါ တယ်..။
သူမရဲ့ အမိုက် စားပုံရိပ် နဲ့ ဆက်ဆီ ကျကျ tiktok ဗီဒီယို လေး ကို လူမှုကွန်ယက် ဖေ့ဘုတ် စာမျက်နှာ မှာ ပရိသတ် တွေ ရိုးအီ မသွားရအောင် အသစ် အဆန်းလေး တွေ မကြာ ခန ချပြလေ့ရှိတာ လည်း တွေ့ရပါ တယ်..။ ဒီနေ့မှာတော့ စကပ် တိုတိုလေး ဝတ်ကာ အလန်းစား ပုံရိပ် လေးတွေ ကို “အလိုလိုက်ပေး မယ့် ကိုကို ၁ယောက် လောက် !! ❣️”ဆိုတဲ့ ကပ်ရှင်လေး နဲ့ အတူ ချပြလာခဲ့ တာပဲ ဖြစ် ပါ တယ်..။ ချိုဇင်ရဲ့ ညို့ချက် ပြင်းပြင်း ဗီဒီယို နဲ့အ တူ အလန်းစား ပုံရိပ်လေး တွေ ကိုပါ ပြန်လည် မျှဝေ ပေးလိုက် ရပါ တယ် နော်..။
ပုံလေးထဲ မှာ ချိုဇင်ဝင်းပြည့် တစ်ယောက် ဆွဲဆောင် မှု ရှိရှိ နဲ့ လှရက်လွန်း နေတာလည်း ဖြစ် ပါ တယ်..။ချစ်ပရိသတ် ကြီး လည်း ချိုဇင်ဝင်းပြည့် ရဲ့ အမိုက်စား ပုံလေး ကို ကျေနပ် သဘောကျ မယ် ထင်ပါ တယ် နော်..။ နောက်ထပ် လည်း အသစ် အသစ်လေး တွေ နေ့စဉ့် တင်ဆက်ပေးဦး မှာမို့ Pageလေး ကို like&Follow လေးလုပ် ထားဖို့မမေ့ နဲ့ နော်…။
သြယ္လ် က်စ္လစ္ လွပ လြန္းတဲ့ ခႏၶာကိုယ္ အလွ နဲ႔ အတူ မို႔ေမာက္ ျပည့္တင္းတဲ့ ခႏၶာကိုယ္ ေကာက္ေၾကာင္း အလွ ေတြကို ပိုင္ဆိုင္ ထားတဲ့ ဆက္ဆီ ေမာ္ဒယ္လ္ ခ်ိဳဇင္ ဝင္းျပည့္ ကို ပရိသတ္ ေတြ သိၾကမယ္ ထင္ ပါတယ္ ေနာ္..။ ဆက္ဆီက်က် ညိဳ႕အား ျပင္းျပင္း ဖမ္းစား နိုင္သူေလးျဖစ္တာ ေၾကာင့္ ပုရိသေတြ ေတြ ဝန္းရံမႈ ကို ရရွိပိုင္ ထား သူ ေလးျဖစ္ပါ တယ္..။ သူမ ကေတာ့ လွပၾကည္ လင္ တဲ့ အသားအေရေလး နဲ႔ ေကာ္ပတ္႐ုပ္ေလး လို ခ်စ္စဖြယ္ မ်က္ႏွာေလး ကိုပါ ပိုင္ဆိုင္ထား သူေလး လည္းျဖစ္ ပါ တယ္..။
သူမရဲ့ အမိုက္ စားပုံရိပ္ နဲ႔ ဆက္ဆီ က်က် tiktok ဗီဒီယို ေလး ကို လူမႈကြန္ယက္ ေဖ့ဘုတ္ စာမ်က္ႏွာ မွာ ပရိသတ္ ေတြ ရိုးအီ မသြားရေအာင္ အသစ္ အဆန္းေလး ေတြ မၾကာ ခန ခ်ျပေလ့ရွိတာ လည္း ေတြ႕ရပါ တယ္..။ ဒီေန႔မွာေတာ့ စကပ္ တိုတိုေလး ဝတ္ကာ အလန္းစား ပုံရိပ္ ေလးေတြ ကို “အလိုလိုက္ေပး မယ့္ ကိုကို ၁ေယာက္ ေလာက္ !! ❣️”ဆိုတဲ့ ကပ္ရွင္ေလး နဲ႔ အတူ ခ်ျပလာခဲ့ တာပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္..။ ခ်ိဳဇင္ရဲ့ ညိဳ႕ခ်က္ ျပင္းျပင္း ဗီဒီယို နဲ႔အ တူ အလန္းစား ပုံရိပ္ေလး ေတြ ကိုပါ ျပန္လည္ မၽွေဝ ေပးလိုက္ ရပါ တယ္ ေနာ္..။
ပုံေလးထဲ မွာ ခ်ိဳဇင္ဝင္းျပည့္ တစ္ေယာက္ ဆြဲေဆာင္ မႈ ရွိရွိ နဲ႔ လွရက္လြန္း ေနတာလည္း ျဖစ္ ပါ တယ္..။ခ်စ္ပရိသတ္ ႀကီး လည္း ခ်ိဳဇင္ဝင္းျပည့္ ရဲ့ အမိုက္စား ပုံေလး ကို ေက်နပ္ သေဘာက် မယ္ ထင္ပါ တယ္ ေနာ္..။ ေနာက္ထပ္ လည္း အသစ္ အသစ္ေလး ေတြ ေန႔စဉ့္ တင္ဆက္ေပးဦး မွာမို႔ Pageေလး ကို like&Follow ေလးလုပ္ ထားဖို႔မေမ့ နဲ႔ ေနာ္…။
Previous post ရွှေရင်မွှာလေးတွေ အထင်းသားပေါ်လွင်နေတဲ့ မရမ်ဆိုင်းနူးရဲ့ အလန်းစား TIK TOK ဗီဒီယိုဖိုင်
Next post ကိုကို မောင်မောင်တွေအကြိုက် အရှိတ်အကောက်အလှတရားလေးတွေ ထင်ရှားပေါ်လွင်နေတဲ့ နန်းသီရီမောင်ရဲ့ ဗီဒီယိုလေး